In dhallaanka lagu baro afka hooyo iyada oo loo marayo hab masraxeed - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
In dhallaanka lagu baro afka hooyo iyada oo loo marayo hab masraxeed
La daabacay fredag 22 mars 2013 kl 09.44
In dhallaanka luuqadda lagu baro hab masrax-tiyaatareed
Junyu Wus oo barata luuqadda hooyo.Sawirle: Kerstin Edquist.
Afka oo lagu barto oogada oo dhan iyada oo la adeegsaneyo culuunta rabaayadda dhallaanka. Goolka laga leeyahey qorshaha Aktesne ayaa la xiriira sidii hab ka duwan midka fasallada lagu dhigto loo baran lahaa luuqadda Saamiska, sida ay sheegtay maamulha aqorshaha aktesne Zara Andersson
- Qorshahan ayaa loo loo fekerey sidii loo abuuri lahaa suurtagallo ey ku kulmaan dhallaanka qoowmiyadda Saamiga sidii ey wada-jir ugu abuuran lahaayeen qab-weyni la xiriirta luuqaddooda iyo dhaqankooda.
Ereyga Aktesne ayuu macnihiisu yahay wada-jir iyadoona ay maamulaha qorshahan Zara Andersson kaga heshay guddiga dhaqanka ee is-maamulka xubnaha baarlamanka ee qowmiyadda saamiga miisaaniyad gaarsiisan 120 000 oo koron, sidii qorshahahan lagu hir-gelin lahaa. Qorshahan ayaa saameeya dhammaan dhallin-yarada asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Saamiga ee ku dhaqan nawaaxiga degmada Strömsund, iyadoo looga gol leeyahey sidii meel la isugu keeni lahaa halka mid walba dhankiisa wax looga bari lahaa. Dhanka kale waxaa yeelan doona wada-shaqeeyn maamulaha qorshahan iyo macallinka tababaraha luuqadda. Andersson ayaa horay u dhigatay machadka masraxa ee magaalada Gävle, halkaasina oo uu ka biloowday xiisaheeda la xiriira wax-barashada iyada oo loo eegeyo qaab guud. Qaabka barashada luuqadda Saamiga ee iskuullada ayaa ah mid aan xiise-gelineyn dhallaanka. Waana mid loo baahnaan lahaa in la dardar-geliyo, sida ay sheegtay Andersson:
- Habka barashada masraxa ayaa lagaga hadlaa sidii oogada oo dhan wax looga baran lahaa, iyadoo aannay markaa aqoontu ku xirnayn oo keliya maskaxda iyo sidoo kale oogada. Waxaa la oran karaa aqoonta loo maro qoob ka ciyaar.
Tusaale ahaan waxaa la oran karaa ereyga Uubato, markaa oo loo dhaqaaaqo iyada oo la meteleyo xayawaanka uubatada, waa mid markaa oogadu fahmeyso ereyga macnihiisa. Waa hab loo istcmaalo dhanka wax-barashada ee culuunta masraxyada. Muhiimadda kale ee qorshahan ka dambeeysa ayaa ah sidii ey meel ugu kulmi lahaayeen dhallaanka ka soo jeeda qowmiyadda Saamiga. Meel ey ku dareemi karaan iney aqlabiyad ku leeyihiin , halkaasina muhiimadda lagu saareyo luuqaddooda, sida ay sheegtay Zara Andersson:
- Waxaan sidoo kale qabaa in dhammaan dadaalladu ha qaataan wakhti yar ama mid dheere ey kor u qaadaan heerka hamiga. Waxaan sidoo kale rajeeynayaa in muddadaa kadib ay doonistu heerkaa taagnaato oo aanay hoos uga soo degin.